SM နဲ့ JYP က Female idols တွေရဲ့ visual တွေကို ယှဉ်ကြည့်ပြီး ဘယ်သူကပိုချောတယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ K netizen တွေ
Kpop လောကမှာတော့ SM Entertainment နဲ့ JYP Entertainment က idol တွေဟာ visual ကြောင့် လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် SM က idol တွေဆိုရင် ချောလို့ အရွေးခံထားရတာပါ။ ပြုတ်သွားတဲ့ trainee တွေတောင် အချောအလှလေးတွေများပါတယ်။JYP လည်း ထို့အတူပါဘဲ။ မိန်းမသားဆန်ပြီး သိမ်မွေ့လှပတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လေးတွေ များပါတယ်။
လတ်တလောမှာ Korea က netizen တစ်ယောက်ဟာ “Visual ဆို ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ SM နဲ့ JYP က idol တွေကို ယှဉ်ကြည့်ကြရင် ဘယ်လိုလဲ” ဆိုပြီး poll တစ်ခုလုပ်ကာ voting လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူပိုလှလဲဆိုတာ သိချင်တဲ့အတွက် ခုလို data ကောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ K netizen တွေအများအပြားဟာ ထို post အောက်မှာ စုရုံးလာကြပြီး မှတ်ချက်တွေ ခုလိုဝိုင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။
(4) Itzy’s Yuna
“Suzy က SM ရဲ့ visual idol တွေ အကုန်လုံးကို အနိုင်ယူနိုင်မယ် လို့ ငါထင်တယ်” “Yonna ရဲ့ visual ကို ဘယ်သူက ယှဉ်နိုင်ပါ့မလဲ” “ငါ့အမြင်ကတော့ Tzuyu က သာ အချောဆုံး” “Irene လေးက ချောလိုက်တာ” “JYP ကို girl groups တွေရဲ့ Power house လို့ ခေါ်ကြတာ ဒါကြောင့်လေ …
သူတို့ကချောတယ်” “SM ရဲ့ visual line up က အသာဆုံးလို့ ငါထင်တယ်” “Irene က girl group တွေအားလုံးထဲမှာ အချောဆုံးဘဲ” “ခုချိန်မှာ Karina က အကောင်းဆုံးလို့ ထင်တယ်” “Jyp က boy group တွေဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး.. Girl group ကတော့ JYP က ဆိုရင် အားလုံးက visual အချောအလှလေးတွေ” K netizen တွေရဲ့ မှတ်ချက်တွေကတော့ အစုံပါဘဲနော်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော ဘယ်သူက ပိုချောကြတယ် ထင်ပါသလဲ??
Previous post အနုပညာ​သက်တမ်းတစ်​လျှောက် Daesang ဆု​တွေကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြဖူးတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသား​များ
Next post ပြိုလဲကျရှုံးချိန်တွေ ကြုံတွေ့လာရတိုင်း ထားသင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို အကြံပြုအားပေးဖူးတဲ့ Suga